Home Wararka Axmad Madoobe oo la filayo in uu Garowe ku tago booqasho aan...
Axmad Madoobe oo la filayo in uu Garowe ku tago booqasho aan la shaacin
Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ayaa lagu wadaa in uu maalmaha soo socda safar aan la sii shaacin ku tago magaalada caasimadda Puntland ee Garoowe.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa sida wararku sheegayaan Garoowe ku yeelan doono shir gaar ah oo ku saabsan doorashada Aqalka hoose ee Baarlamanka Soomaaliya. Labada madaxweyne ayaa go’aan ka qaran doono qaabkii ay u wajiyo lahayeen qorshaha Farmaajo uu ku doonayo in ku daahiyo doorashada.
Siciid Deni iyo Axmed Madoobe ayaa markii hore qorsheeyay in ay Nairobi ku kulmaan balse madaxweyne Deni ayaa safarkaas ka baaqday. Sidoo kale Ra’iisul wasaare Rooble ayaa codsaday in uu isaganaga ku biiro shirkaas Sabtida laakiin wali ma cada in ay labada mas’uul ay la kulmi doonaan Rooble isaga aan iska beri yeelin qorshaha Farmaajo.